DAAWO: Dagaalka S/Galbeed & Canfarta Dhexmaraya, waa maxay Yoolkiisu?
April 7, 2021 Farah Abdulkadir Mohamed 1
JIGJIGA(P-TIMES) – Dagaalo sababay dhimashadii ugu badnaa ayaa ka dhacay 24saac ee lasoo dhaafay dhulka ama Xaduudaha ay wadaagaan Soomaalida & Canfarta, waa dagaal soo taagnaa mudooyin dheer, waa mid kamid ah dagaalada loo yaqaano Xarbul-Wakaala, dagaal ay cid kale masuul uga yihiin Canfartu, waana marino muhiim ah oo la doonayo in laga saaro gacanta Soomaaliya.
Ka sokow dagaalada, goobaha lagu dagaalamayo waa 3 deegan oo muhiimad weyn ugu fadhiya Soomaalida Geeska Afrika, kooxdii EPDRF ee ay talada u haysa TPLF-tii Geeska Afrika ayaa abaabulay in uu ahaado mid aan damin oo waligiis tagnaada, markii deegaano Soomaaliyeed la hoos-geeyey Ismaamulka Canfarta, si fududna ay xiligaas uga saxiixday madaxdii deegaanka Soomaali Galbeed.
Dadka la socda aarrimha dagaaladan, ayaa hoosta ka xariiqaya in dagaalkan uusan aheyn muran dhuleed u dhaxeeya Soomaalida & Canfarta, sidas oo kale uusan aheyn mid laysku hayo oo kaliya Carshin iyo Ceel.
“Waa qorshe fog oo ay Itoobiya dhameystiran oo aan kala laheyn qowmiyad iyo Qabiil, gaar ah ku taamaan sidii ay u baneysan lahaayeen dhamman marinada muhiimka ah ee ku xariirin kara Baddaha Soomaaliyeed ee Badda Cas iyo Badweynta Hidniya” ayey leeyihiin dadka dara ISbedelada Geeska Afrika.
Gobalka Soomaali Galbeed (S/State-ka maanta), halka uu Juquraafi ahan dhaco waa marin muhiim u ah Itoobiyaanka, waana goob ay maskaxda ku hayaan Madax kasta oo isbedesha, muhiimadda ay u arkaan ka sokow ka gaarida Baddaha ugu dhaw, haddana waa marin muhiimad isku xira dhawr dal oo ay Addis Ababa u aragto in gacanta Soomaalida laga ilaaliyo.
Mudo dheer ayay Soomaalida oo u abaabulan hab-qan aan yool-dheer lheyn wajahayaan dagaal culus oo mudo la abaabulayo, Dagaalka hadda ee Galbeedka Sitti waa mid kamid ah dhacdooyinkaas ayay rumeysan yihiin dadka la socda ama sida dhaw wx uga qora.
TPLF, yoolkeeda ugu weyn ayaa ahaa in dadka Soomaliyeed gacantooda laga saro dhawr deegaan oo ay u aragto muhiimad weyn in ay ugu fadhiyaan Shacuubta Itoobiya, waxayna fikradas ka dhaxashay Mingiste Xayla-Maryam oo isna kasoo minguureyey Xayla-Salaase oo isna ka soo dheegtay Boqoradii kahoreeyey ee Itoobiyaan fikraddan.
Deeganka Mooyaale waa xaduuda gobalka SOomali Galbeed la wadaago Kenya, waana halka dhaqaalaha ugu badna lagu bixiyey sidii looga riixi lahaa bulshada Soomaliyeed, dad badan waxay rumeysan yihiin in qorshahaas kala bar ku dhawaad uu hirgalay, laakiin fahamka Soomalidu uusan garsiineyn dhagarta kusocot.
Aagga hadda lagu dagaalamayo Galbeedka Sitti, waa xaduda Soomali Galbeed la wadaago Jamhuuriyada Jabuuti, waa marin muhiim ah oo ay Tigree-gii Itoobiya gacanta u galiyeen Canfar, si ay uga dhigaan caqabad dhuleed aan dhammaad laheyn, waana aagag Soomaaliyeed oo loo arko muhiimad weyn mid ku fadhida.
Iyo jihada Dirirdhaba & Deegaanada ka xiga dhinaca Saylac waa xaduud kale oo muran badan hareeyey, waa aag wali u diyaarsan isku dhac-hubeysan, waana goob kale oo marin u ah Saylac-Soomaaliya, waa halka ay Itoobiyaanku doonayaan in ay ka dhigtaan mar uun saldhig Milateri oo ciidankooda Badda ah.
TPLF VS OROMO Ayuu u dhaxeeyaa was proxy war.
Oromo Somali dhulka lagu dagaalamayo u badi dhul Somali leedahay.